Piroofeesar Masfin Woldamaariyaam addunyaa kanarra du’aan boqotan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPiroofeesar Masfin Woldamaariyaam addunyaa kanarra du’aan boqotan
Beektota biyyattii keessaa tokko kan ta’aniifi namni siyaasaa Piroofeesar Masfin Woldamaariyaam addunyaa kanarra du’aan boqotan.
(bbcafaanoromoo)–Piroofesar Masfin kana dura dhukkubsatanii hospitaalaa seenuun isaanii wallaansa argataa turuun halkan KibtaxaaALI Fuulbaana 19, 2013tti umurii waggaa 90tti addunyaa kanarraa du’aan boqachuusaanii maatiin beeksisaniiru.
Pirof Masfin bulchiinsa mootii Haayile sillaasee irraa eegalanii mootummoota Itoophiyaa ifatti qeequufi waanta itti dhaga’amee kitaabaafi mala adda addaan ibsuun beekamu.
Finfinnee keessatti bara 1922’tti kan dhalatan barumsa idilee egaluun dura bataskaana keessatti barnoota amantaa hordofuun daaqonii akka ta’an seenaan isaanii ni ibsa.
Sana booda mana barumsaa Inxooxxootti baruumsa sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa barachuun barattoota qabxii gaarii qaban keessaa tokko turan.
Yeroo sanatti carraa biyyaa alaa deemuun barchuuf, barumsa barattoota ciccimoof kennamuu isaanis argataniiiru.
Kanaanis gara biyyaa Hindii deemuun digirii jalqabaa isaanii Yunivarsitii Panjaab irraa erga argatanii booda UStti ammoo, Yunivarsitii Kilaark irraa digirii lammataa argataniiru.
Pirof. Masfin barnoota isaani fixaanii Itoophiyaatti erga deebi’anii booda Yunivarsitii keesatti barsiisummaan tajaajilaa turan.
Yunivarsitii Finfinnee keessatti kutaa barnoota Joogiraafii keessatti barsisummaafi hogganaa kan turan yoo ta’u, akkasumas barnootichaaf kitaaboota ta’an qopheesunnis ni beekamu.
Dabalataanis barreeffamoota qorannoo hedduufi kitaaboota maxxansiisaniiru. Barreefamoota mata duree adda addaa qopheesunis gaazeexaa, barruleefi miidiyaalee hawaasumma akka Feesbuukii irratti hirmaachaa turaniiru.
Keessumattu balaa beelaa irra daddabi’ee mudachuudhaan uummata Itoophiyaatti qormaata kan ta’e efi ‘xannee’ jechuun kan waaman, irratti wanti isaan barreessan hojii isaanii eeramu keessa tokko. Kitaabni kun akka wabiittis yeroo gargaaru ni kaafama.
Yeroo mootii Haayilasillaaseetti beela uumametti iddoo adda addaa deemanii dawwachuun namoota rakkatan gargaaruuf waayiloota isaanii waaliin akka yaalan hedduun dhugaa ni ba’uufi.
Pirof. Masfin barsisummaan isaanii alattis, siyaasaafi wantoota guyya guyyaatti argan irratti qeeqaafi gorsa siyaasaa akkasumas hawaasummaa barreeffama isaanii keessatti ni barreessu ture.
Barreefamoota dheeraan alattis yaadaa isaanii gama walaloo barreessunis ni beekamu ture.
Kanaafis fakkeenya kan kitaaba kusaa walaloo isaani ‘Ingurguroo’ jedhamudha.
Kitaabni kun dhimmoota adda adda xuquun dabalataan jechootni filaataman hiika guddaa kanneen qaban ta’uu namootni dubbisan ni himu.